UJulia Parshuta kunye noDmitry Dibrov bathathwe kwi-Sochi
Isimo sezulu esibi eSochi satshintsha izicwangciso ezininzi. Ukuxhatshazwa kwiindawo eziphathekayo zendalo kunye nabameli bezoshishino zasekhaya. Njengoko kwaziwa kwiintanethi zoluntu, inqwelomoya yaseSochi, ikhukhula ngemvula, ayizange ihambe ngokukhawuleza kubini abantu abadumileyo - umculi uYulia Parshut kunye nombonisi uDmitry Dibrov. Amaphephandaba, ukubika iingxelo zakutshanje ngezulu elibi, liye laphawula ukuba usuku olukwimizi e-2 kwimizuzu yokunyuka kweenyanga zanyuka. Ukusebenza ukuphelisa imiphumo yemvula eninzi kwisixeko eso siyaqhubeka.
UJulia Parshuta unamathele kwisikhumulo sezindiza
I-solo-soloist yeqela elithi "Yin-Yang" uYulia Parshuta, osebenza ngokusesikweni, waya eSochi esuka eMoscow, enenjongo yokutyelela abazali bakhe. U-Julia, iintsuku ezimbini ezingenalo iphupha esebenza kwividiyo entsha, ekwazi ukufika kwi-moya ye-Sochi ukuhamba ekuseni kwaye mhlawumbi ibhabhele kwindawo leyo, kodwa isiza-moya sekhaya lomculi waso sasinamanzi kangangokuthi kwakungeke kwenzeke ukuphuma kuyo. Ayikwazanga ukufika kuYulia aze adibane nentsapho yakhe, naye wamxelela kunye nokukhukula komgangatho wokuqala wendlu yabo.
Nge-Instagram, uParshut washicilela iifoto kunye namavidiyo ukusuka kwigumbi lokulinda, apho abantu behamba khona behamba ngamanzi. Amazwana, apho umculi washiya khona, waba nemvakalelo kunye nokukhanya, edonsa ibali elifutshane.
"Inyikima, njengoko kuTitanic, ngoThixo, abantu bayothuka, ootatakazi, oomama abangendawo, abantwana abonwabileyo, ngoku i-orchestra iya kudlala. Abasetyhini nabantwana - emkhombeni, - umculi ubhala. - Akunakwenzeka ukuba ushiye isikhumulo sezindiza, akukho moto ufika kuyo. Ndimi esitratweni ndingaphuphule i-instagram, estessno, yintoni enye enokuyenza! "
Intombazana kwafuneka iphumelele kumgangatho we-2, ukuba yome apho kwaye ibeke umyalelo.
UDmitry Dibrov wayengenakukwazi ukundiza esuka eSochi
Ngelo xesha, umyeni waphoswa kunye nomfazi kaDmitry Dibrov, uPauline. UDmitry kwakufuneka afike eMoscow, kodwa imvula eninzi yaseSochi yenze ishintsho kwishedyuli yomsebenzi wakhe. UPolina, kunye nabantwana bakhe abathathu, elinde umyeni wakhe endlwini yaseMoscow, wabona iifoto ezithathwe kwi-capital Olympic. Imifudlana yamanzi endaweni yezitrato kunye neendlela ezinkulu zeLwandle oluMnyama zatshitshisa umama omncinci.
"Ndilindele umyeni wam ukuba ahambe ekhaya kwisixeko esizukileyo saseSochi," uPolina wabhala kwiphepha lakhe nge-Instagram, wathumela isithombe soSochi. - Kulo mfanekiso akukho mlambo nje, kwisithombe somgwaqo omkhulu, apho umlambo ugeleza khona, okhokelela kwisikhululo. Ngoko ayaziwa xa sidibana. Bathi isikhumulo sezindiza sijonge ngokufanayo. "
Ngubani oza kuphumelela ilizwi. Abantwana be-2016 - ukubhuka kubhuki
Imfihlelo yokulahlekelwa isisindo i-Anfisa Chekhova yaziwa: ukuphumeza umphumo, kuya kuthatha imizuzu eyi-10 kuphela
ULaima Vaikule watsho ngokucacileyo ukuba kutheni engenabantwana
I-Sauce kwi-garlic eyobhaka kunye neembotyi
I-Appetizer yenkukhu yenkukhu kwi-sauce yase-orange
Imbali yephephancwadi elithi "Burda"
Ukusika umlilo, yintoni efana nayo
Izimpawu ezinomdla kunye nezinkolelo zabantu abadumileyo
Iifotyi zee-asparagus ezinama-almond
Ikhadi lebhizinisi laseRashiya ukutya - i-pancake kunye ne-caviar ebomvu neyemnyama, zokupheka kunye nesithombe
Ulters ngolwimi: izizathu kunye neendlela zokonyango
I-Fitbol yokulahleka kwesisindo